Global Voices teny Malagasy » Zimbaboe : Ny Zimbaboeana sy ny fahafatesan’i Ben Laden · Global Voices teny Malagasy » Print
Zimbaboe : Ny Zimbaboeana sy ny fahafatesan'i Ben Laden
Voadika ny 15 Septambra 2018 3:16 GMT 1	 · Mpanoratra Madalitso Mwando Nandika (fr) i Claire Ulrich, Liva Andriamanantena
(Marihina fa tamin'ny 3 May 2011 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Rehefa nandre ny fahafatesan’ i Ben Laden, ‘’ilay lehilahy tena nokarohina indrindra eran’izao tontolo izao’’ dia namalan-kira ny Zimbaboeana. Angamba noho ny zava-misy fa i Etazonia no namono an’i Ben Laden, izay heverin’ny sasany fa tompon’andraikitra tamin’ny fahasarotana ara-toekarena ao amin’ny fireneny, sy ny sazy ary ihany koa ny ‘’imperialisma’’ fanaony.
Nomarihin’i  Gift Pheria  teo amin’ny pejin’ny Facebook-ny :
Arahabaina i Obama, noho ny namonoany ity mpampihorohoro ity tamin’ny bala teo amin’ny lohany izay efa nandrasana hatry ny ela. Ny fianakavian’ireo niharam-boina tamin’ireny vonoan’olona tamin’ny 11 Septambra ireny…anisan’izany ny nahafatesan’ny fianakavian’ireo mpanao gazety, izay nahafaly ahy ny nihaona taminy tany New York tamin’ny herintaona- dia afaka mamadika ny pejy amin’izay noho ilay hetsika notarihin’i Obama.
Niditra an-tsehatra ihany koa i George Mhembere tao amin’ny rindriny Facebook: 
Namono ireo olona rehetra mitovy amin’i Oussama Ben Laden i Etazonia ary nanamarina izany niaraka tamin’ny fitiliana ADN.
Feno fanehoan-kevitra ihany koa ny sehatra fifanakalozan-kevitra  New Zimbabwe. Naneho ny heviny  ny eveka Tshepanga Mokoena hoe :
Ny 1 May 2011….no maty i Oussama. Ny 1 May 1945 no andro nahitana an’I Hitler maty. VOLAN’NY FAHAGAGANA NY VOLANA MAY.
Notohizan’i  Mokoena hoe :
Aza mandrimandry ry mpiambina, azafady, sao hadino fa manana mpianatra an’arivony i Ben Laden. #Vavaka
Amin’ny fiteny Shona, nanoratra i Ancestor hoe :
Vatanga imwe hondo mabharanzi aya… [vao nanomboka ady vaovao ry zareo, ireto adala ireto].
Nanoratra  i Rufus tao anatin’ny sehatra fifanakalozan-kevitra, mitondra ny lohateny hoe : ‘’Namono an’i Oussama i Obama, ho voafidy indray izy ’’,.
Azonareo atao ny mankahala an’i Obama, nefa azo antoka ny zavatra iray, nanao ny asany izy. Tsy tiako ny herisetra, kanefa lehilahy nahery setra i Oussama, izay niafara tao anatin'ny herisetra ary tokony hoderaina ry zareo tao Etazonia noho ny naharetany tamin’ny fanenjehana, na dia mbola tsy vita aza ny an'ilay marary saina. Tsy minamana amin’ny fahavalo, averiko indray, izay tsara ananana ry zareo Amerikana!
Nandrahona ireo ‘’mpanjakazaka sy ireo mpampihorohoro’’i EL Joto Mutasa. Namela fanehoan-kevitra  tao amin’ny tranonkalan’ny Zimbabwe Mail izy
Hafatra ho an’ireo rehetra mpanjakazaka, mpampihorohoro, mpamono olona ary ireo mpanao didy jadona, fa tsy maintsy manefa ny heloka vitany izy ireo indray andro any. Ankehitriny, hitodika any amin’ny andiana mpamono olona vaovao sy mpandroba ny fifantohana. Mijery an’i Afrika ny Anjelin'ny Fahafatesana ankehitriny. Handresy ny tena fahamarinana any amin’ny farany.
Nefa nisy ihany koa ireo Zimbaboeana nisalasala tamin’ny nahafatesan’i Oussama ka nitaky porofo tamin’izany.
Tsy resy lahatra tamin’ireo ‘’porofo’’ireo i Tsano Tsano. Nolazainy izany tamin’ny fanehoan-kevitra tamin’ity lahatsoratra  ity :
ENY ENY ENY. Raha maty marina izy, nahoana no tsy nomeny antsika ireo sary na koa ireo lahatsary mirakitra izany. Tadidionareo fa ireo olona ireo ihany no nampiseho antsika ny fisamborana an’ i Saddam, hatramin’ny minitra farany nahafatesany. Na ho an’i Gbagbo aza dia nasehon-dry zareo ny sary tamin’ny nisamborana azy. Na dia tamin’i Jonas Savimbi aza, dia azo nojerena ny fatiny. Fampielezan-kevitra fotsiny izany. Nosamborina tamin’ny vao maraimbe i Ben Laden, ary adiny dimy monja taty aoriana, ‘’nalevin’’’ireo Amerikana izy, tao anatin’ny ‘’fanajana ny fomba amam-panao Miozolomana’’. Andriamanitra ô. Aza maika aloha, Pamwendinindirikupenga. Aleo aloha andrasantsika, fa angamba mety ho hitantsika ireo sary ireo.
Nisy ny fahatezerana mafy tao Zimbaboe, noho ny fitondrana ratsy tantana, ny tsy fanajana ny zon’olombelona, ny famoretana ireo mpanohitra ara-politika, izay hitan’ireo mpisera aterineto sasantsany fa ny fahafatesana no vahaolana farany. Eveka iray voampanga taona vitsivitsy lasa izay  noho izy nivavaka mba hahafatesan’ny Filohan’i Zimbaboe.
Nisioka i Tinotenda Kwaramba  hoe :
Vaovao farany tao amin’ny Z-TV [fahitalavitra nasionaly ao Zimbaboe] : toa hita teo am-pisotroana kafe niaraka tamin’ny Filoha Mugabe sy Khadafi tao amin’ny hotely iray tao Harare i Oussama Ben Laden……
Tsy isalasalana fa ho hita amin’ny andro manaraka ny andiana fanehoan-kevitra vaovao ao amin’ity faritr’izao tontolo izao ity.
*Sary natolotr’I Johnnie Maneiro tao amin’ny Flickr (CC BY –NC-SA 2.0)
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/15/126032/
 Rehefa nandre ny fahafatesan’: http://www.nytimes.com/2011/05/02/world/asia/osama-bin-laden-is-killed.html
 amin’ny rindriny Facebook:: http://en-gb.facebook.com/gmhembere/posts/146594798744814
 sehatra fifanakalozan-kevitra: http://forum.newzimbabwe.com/index.php?/topic/39594-osama-bin-laden-photo/
 Naneho ny heviny: http://forum.newzimbabwe.com/index.php?/topic/39594-osama-bin-laden-photo/page__view__findpost__p__484234
 Namono an’i Oussama i Obama, ho voafidy indray izy: http://forum.newzimbabwe.com/index.php?/topic/39601-obama-kills-osama/
 Namela fanehoan-kevitra: http://thezimbabwemail.com/world/7971-al-qaeda-leader-osama-bin-laden-is-dead.html
 Eveka iray voampanga taona vitsivitsy lasa izay: http://discussions.ghanaweb.com/viewtopic.php?p=73219&sid=a3de4484d2c69d93c8bc358072fb79fd